Help:Contents/Faayida Icon - Wikipedia
GOOTA XULAA EJERSAA
Goota beekkamaa Oromoo Gujii kan bara mootii H/s keessa nafxanyoota baay'ee barbaddeessaa tureedha. Guyyaa tokko nafxanyaan hiriyaa isaa tokko biraa ijjeese. Gaafa tokko ammoo isaa fi obboleeyyan isaa lama waliin qabanii mana hidhaatti geessani akka fannifaman itti murtassani.
Jiraan qaawa lubbuu hin dhabu akkamu jedhamu manni hidhaa yoo inni munyuussee laale cabe. Worroota mana hidhaa keessa jiran hundaafuu karaa saaqe itti dhagarsiise. Hanga latti dhiitutti akka nafxanyaan hin dhagarre qaawa san yeroof cuqqaale.
Lafti dhiinaan yeroon hirriibaa geennaan namoota dadamakse. faana ka'uu didanii jennaan tafiitiin baye. Huccuu isaanii irraa guuree qoree shuboo dalleya mana hidhaa irra afuun jalaa baye. Namoota mana hidhaa keessa jiranii fi obboleeyyan isaa lamaan ganama san fannifamanii ijjeefaman. Gootni Xulaan qabsoo nafxanyaa barbadeessuu itti fufe.
B/saa Damee Qilxaa
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Help:Contents/Faayida_Icon&oldid=29790" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 15 Fulbaana 2017, sa'aa 07:56 irratti.